CIN Khabar दलहरूले चुनावको खर्च किन लुकाउन खोजिरहेका छन् ?
दलहरूले चुनावको खर्च किन लुकाउन खोजिरहेका छन् ? बिल सङ्कलनको काममा नेताहरू व्यस्त, माओवादीले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि विवरण सार्वजनिक गर्ने
स्नेहा कर्ण आईतबार, माघ ९, २०७८, ११:३८:००
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा एमालेले १० औँ महाधिवेशनका लागि हरेक क्रियाशील सदस्यले १ रुपैयाँ जम्मा गर्ने अभियान चलायो ।
यसबाट ८ करोड रकम उठाउने योजना पार्टीको थियो । त्यसबाहेक पार्टी सदस्यतावापतको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि उठेको थियो ।
चितवनमा महाधिवेशन सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि हिसाब भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
एमाले पार्टी कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीले महाधिवेशनमा भएका खर्चको बिल सङ्कलको काम भइरहेको र चाँडै खर्च सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले महाधिवेशनबाट उठेका रकम केमा र कति खर्च भयो, कतिको पैसा तिरियो र कति तिर्न बाँकी छ, त्यो सबै सङ्कलन गरेर मात्रै महाधिवेशनको खर्च सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि दलले महाधिवेशनको खर्च र आम्दानीको हिसाब सार्वजनिक गर्ने विषय विधानमा लेखेका छैनन् ।
त्यसैले पनि उनीहरूलाई समयमै देखाउनुपर्ने नैतिक दवाव छैन । काठमाडौँमा ३ करोडभन्दा बढी रकमबाट महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको योजना कति सफल वा अपुग भन्ने हिसाब ४५ दिनभन्दा धेरै समय बित्दा पनि खुलाइएको छैन ।
दलहरूले लेबी, सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि दर्ता शुल्क, चन्दा, सहयोगका नाममा करोडौँ रकम उठाउँछन् । तर वास्तविक खर्च र आम्दानी दलहरूले सार्वजनिक गर्दैनन् भन्नुहुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरी अर्याल ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले अघिल्लो कार्यसमितिले नै सबै हिसाबकिताब हेरेको हुँदा आफूहरूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले अघिल्लो कार्यसमितिबाट हिसाब मागिएको र चाँडै महाधिवेशनको खर्चबारे जानकारी सार्वजनिक गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सकिएको पनि एक महिना बित्यो । ८ लाखभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य छन् भन्ने दावी गर्ने काँग्रेसको महाधिवेशनमा खर्च कति भयो ?
जवाफमा पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइनेछ । अनुमानित २ करोडजति खर्च भयो होला । तर, केमा र कति खर्च भयो भन्ने विस्तृत जानकारी राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ ।’
गत पुस ११ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ करोड रकम उठाएको दावी गरेको छ । त्यसमध्ये १ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको पार्टीको लेखा आयोगका अध्यक्ष पेशल खतिवडाले बताउनुभयो ।
उहाँले महाधिवेशनमा ३ करोडजति रकम उठेकोमा २ करोड खर्च भएको भन्दै खर्चको हिसाब मिलाउने काम तथा बिल सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सुशासन र पारदर्शीको बारेमा भाषण गर्न होस् वा नीति बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कसैले भेट्दैन । निश्चित समयको अन्तरालमा हुने महाधिवेशनका नाउमा भएको करोडौखर्चको विववरण सार्वजनिक गर्न दलहरूले समय लगाइरहेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशनको क्रममा कतिपयलाई पहिले नै भुक्तानी भइसकेको थियो भने कतिको भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यसकारण सबै सङ्कलनको काम भएपछि मात्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । सम्भवतः राष्ट्रियसभाको चुनावपछि महाधिवेशन खर्च विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’
उहाँका अनुसार दलहरूले समयमै खर्च सार्वजनिक नगर्ने, खर्चका लागि उठाइएका रकमबारे प्रष्ट नखुलाउने, अपारदर्शी रुपले काम गर्ने हुँदा त्यसले दलमाथिको विश्वसनियता घट्ने हुन्छ । दलहरू नै अपरादर्शी भएपछि उनीहरूले कसरी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उहाँको तर्क छ ।
पार्टीले सम्मेलन वा महाधिवेशनका लागि उठाउने रकम कार्यकर्ताको मात्रै हुँदैन, उनीहरूसँग जोडिएका वा नजिक हुन चाहाने व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनबाट पनि अप्रत्यक्ष रुपमा रकम आउँछ । यस्तो लेनदेन पारदर्शी भए भने पार्टीमा स्वार्थ समूह हावी हुने जानकारहरू विश्लेषण गर्छन् ।
सुशासन र पारदर्शीको बारेमा भाषण गर्न होस् वा नीति बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कसैले भेट्दैन ।
तर, निश्चित समयको अन्तरालमा हुने महाधिवेशनका नाउमा भएको करोडौखर्चको विववरण सार्वजनिक गर्न दलहरूले समय लगाइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ ९, २०७८, ११:३८:००
पक्राउ परेका धर्मेन्द्र बास्तोला रिहा, सरकारले दियो अङ्गरक्षक
पूर्व मन्त्री डिम्पलकुमारी झाको निधन
'नो'भोटको व्यवस्था गर्न दलहरूको आनाकानी
घोषणापत्र बारे एमालेले आज छलफल गर्दै
स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने बारे राप्रपा र एमालेबीच छलफल
काँग्रेसले स्थानीय तहमा पनि निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने